पैक एक स्कूल खाजा मूल छ र वातावरण फाइदाको लागि:6विचार
तपाईं आफ्नो बच्चाको लागि एक तयार खचाखच भरिएको भोजन किन्न प्याकेजिङ्ग विघटित गर्न भन्ने तथ्यलाई विचार गर्न चाहनुहुन्छ अर्को समय, एक अविश्वसनीय एक हजार वर्ष आवश्यक! यी साना प्याकेजहरू सिर्जना प्रक्रिया आफ्नो सृष्टिमा ऊर्जा सहित महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोतहरू, साथै आफ्नो यातायात बिताउनुहुन्छ। र हरेक वर्ष सबै दुनिया भर पशुहरू मान्छे हालियो छ कि एक प्लास्टिक ग्रस्त। यहाँ तपाईँले "हरी" आफ्नो बच्चाको विद्यालय खाजाका लागि कन्टेनर र एकै समयमा ग्रह सुरक्षित गर्न सक्नुहुन्छ जसमा छ तरिकाहरू, र आफ्नो वालेटमा मा "हरी" छन्।
कन्टेनर साथ सुरु
स्कूल छोराछोरीलाई तिनीहरूसँग जो लिन लंच लागि कन्टेनर मा नेतृत्व को मात्रा सम्बन्धमा हाल घोटाले पछि, यो विकल्प खोज्ने सुरु गर्न समय छ। खुसीको कुरा, बजार मा आज सिर्जना विभिन्न हानिकारक पदार्थ को संख्या बारेमा शो जानकारी को शुरुवात बच्चाहरु उत्पादनहरूमा पतन पछि थिए वातावरण मैत्री कन्टेनर छन्। एमी Hemmert, ल्याप्टप Lunchbox भनिन्छ यी पारिस्थितिक कन्टेनर एक को निर्माता, आफू र आफ्ना छोराछोरीलाई सबै यो अनुभव छ। "मेरो बच्चाहरु संयुक्त राज्य अमेरिका मा प्राथमिक विद्यालय गए, म जापान देखि ल्याए जो बेन्टो बक्स, आफ्नो लंच पैक - उनले भन्यो। - तर म कहाँ त्यहाँ मेरो बच्चाहरु थिए स्कूल, भ्रमण गर्दा, म याद छ कि बच्चाहरु उत्पादन मा गरिएको पूर्व-प्याकेज गरेको प्रक्रिया खाद्य पदार्थ को skomplektovat थिए भोजन को सबै भन्दा। यी कन्टेनर पुन: प्याक गर्न सकिँदैन, त्यसैले छोराछोरीले सानो खाएको थियो खोलियो, र बाँकी टाढा हालियो छ: कन्टेनर र प्याकेजिङ्ग र खाना। त्यसपछि म त्यहाँ राम्रो तरिका हुनुपर्छ भन्ने लाग्यो। " फलस्वरूप, त्यहाँ originality र पर्यावरण सफाई जोडती जो एक प्याकेज थियो।
को व्यक्तिगत प्याकेज उत्पादनहरु बारेमा बिर्सन्छन्। तिनीहरूले सजिलो लाग्न सक्छ, तर एकै समयमा तिनीहरूले थप बर्बाद उत्पादन। अन्य यस्तै तिनीहरूलाई भर्न पुनः प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने ठूलो कन्टेनर किन्न, तर केवल सानो कन्टेनर मा।
पानी को लागि एक reusable बोतल लगानी
वातावरण लागि भयानक हो, फेरि फेरि प्रयोग गर्न सकिन्छ कि एक बोतल मा आफ्नो बच्चाहरु को लागि रस वा पानी खन्याउन जो सानो पैक मा रस, बिर्सन्छन्। तपाईं स्टेनलेस स्टील केही रोचक मोडेल पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ।
स्यान्डविच लागि प्लास्टिक बैग छोड्न
यो एउटा सानो प्लास्टिक झोला वातावरण हानि गर्न सक्दैन जस्तो थियो। तथापि, तपाईं बच्चा एक वर्षको लागि टाढा हालियो गरिने सबै प्याकेजहरू नपुगेको भने, तपाईं प्लास्टिक को धेरै, वातावरण लागि हानिकारक प्राप्त। र तपाईं धेरै प्लास्टिक एक स्कूल को सबै pupils फेंक कसरी गणना यदि, तपाईं पहिले नै धेरै प्रभावशाली रकम प्राप्त। तपाईं अझ दिगो वैकल्पिक प्रयोग बारे विचार गर्नुपर्छ। कागज - ती साधारण छ, तर अब बजार भन्दा र फेरि स्यान्डविच र्याप गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ कि एक चटाई पाउन सक्नुहुन्छ। सफा गर्न सजिलो र प्रयोग गर्न सजिलो। केही आमाबाबुले हरेक दिन उहाँलाई आफ्ना छोराछोरीको लागि स्यान्डविच र्याप गर्न, घरमा यो उपकरण को एक एनालग सिर्जना गरेर पैसा बचत गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईं उत्पादनहरू मात्र स्वस्थ छन्, जो देखि, स्थानीय किसान गरेको बजार मा खरिद कसरी बनाउने बारे विचार गर्नुपर्छ, तर भण्डारणको लागि कन्टेनर आवश्यक छैन। ताजा एप्पल पहिले नै प्राकृतिक समाप्त प्याकेजिङ्ग बिक्रि भएको छ।
यस खण्डमा बारे मा भूल छैन
थर्मस कुनै पनि उत्पादन छैन मात्र तरल न्यानो राख्न सक्नुहुन्छ। सामान्यतया खाने आफ्नो बच्चाको लागि पूर्ण स्कूल खाजा संकलन गर्न पर्याप्त खाना छ। पास्ता, सूप र सलाद - यो एक महान विकल्प छ। तर तपाईं पनि आफ्नो बच्चाको भोजन थप स्वादिष्ट र सन्तोषजनक बनाउन एक थर्मस तरकारी वा चिकन मा राख्न सक्नुहुन्छ।
कसरी व्यवस्था गर्न: भान्सा लागि रेलहरू? भान्सा सहायक
कसरी साइकल बच्चा चयन गर्न?
तंग जूता कसरी पूरा गर्न: सुझावहरू
सही ब्रा आकार निर्धारण। आकार चार्ट
तकियों बांस फाइबर बनेको: समीक्षा र फोटो
SUPRA, एक humidifier: समीक्षा
ती व्यक्तिहरूका लागि जान्न चाहानुहुन्छ कि कसरी घरमा आँखाबाट टाढा निकाल्न सकिन्छ।
अभिनेत्री र मोडेल Yanina Studilina, जीवनी र रचनात्मक भूमिका
क्षेत्र जहाँ आफ्नो बच्चाहरु विकास - खेल किंडरगार्टन मा कुनामा
आँटा shortcrust र खमीर आटा: प्रविधी र व्यञ्जनहरु निर्माण
Cosmetology मा Microcurrents: प्रक्रिया र contraindications बारेमा समीक्षा
रहस्य विधि: यो के हो?
कसरी एक स्वतन्त्र र आत्म-पर्याप्त बन्न?
रूसी संघ मा एक चालक अनुमतिपत्र प्राप्त
जहाज "मैक्सिम गोर्की": को वोल्गा मा पर्यटन
घरमा प्राकृतिक पत्थर को हेरविचार
नोकिया कसरी फ्लैश गर्न
हामी प्रोटिन खाद्य पदार्थ को सूची अध्ययन र यसको आधार एक स्वस्थ आहार मा निर्माण